XOG: Madaxda Puntland oo ka wada hadlaya rrimaha dagaalada gobalka Sool, Maxaase kasoo baxaya kulamadooda? – Puntlandtimes
XOG: Madaxda Puntland oo ka wada hadlaya rrimaha dagaalada gobalka Sool, Maxaase kasoo baxaya kulamadooda?
October 2, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in saacadihii lasoo dhaafay ay jireen kulamo gaar-gaar ah oo dhexmaray Madaxda Puntland, kuwaas looga hadlayay arrimaha ku saabsan gobalka Sool, gaar ahaana is hor fadhiga ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay madaxda Puntland ee ugu sareeya gaar ahaana Madaxweynaha, Guddiga Difaaca iyo Saraakiisha taliska ciidamadu ay yeesheen kulamadan oo aan faahfaahin xoog leh laga heynin qodobada hoose ee laga xaajooday.
Saacadihii lasoo dhaafay warar soo baxay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isku diyaarinayo dagaalo lagu qaado gobalka Sool, oo ay Somaliland haysatay 12kii sanno ee lasoo dhaafay.
Tukaraq oo ah meeshii ugu dambeysay ee gashay gacanta maamulkaas ayay ciidamada Somaliland qabsadeen bilowgii sannadkan, balse tan iyo xiligaas labada maamul ayaa waday dhaqdhaqaaqyo ciidan mase jirin dhinaca Puntland wax horumar ah oo ay ka gaartay dib u soo celinta deegaanadaas.
Bilo kooban ayaa ka haray mudo xileedka Madaxweynaha Puntland iyo Xukuumaddiisa, waxaana aad isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada ku wajahan arrimaha gobalka Sool, oo ay isku horfadhiyaan ciidamada maamulada Somaliland iyo Puntland.
Siyaasiin iyo musharaxiin ayaa horey uga digay in arrimaha dagaalada gobalka Sool ay caqabad ku noqdaan doorashada Madaxtinimada Puntland, oo ay madaxda hadda joogta ku abuuraan jawi dagaal xili ay bilo kooban ka harsan tahay waqtiga doorashada.
Dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa goobaha labada dhinac, sidda ay wararku sheegayaan, waxaana dad badan ay cabsi ka qabaan dagaal maalmaha dhaw dhexmari karra.